Ken Follet: onye isi ihe kpatara ogidi nke ụwa | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Mgbe netizen rịọrọ ọchụchọ "akwụkwọ Ken Follet", nsonaazụ ya na-arụtụ aka onye akwụkwọ Welsh kacha ere ahịa na ndekọ. Ọ bụ onye edemede nke trilogies Narị Afọ y Ogidi nke ụwa, n'etiti aha ndị ọzọ kacha ere ahịa. Ekwesiri ighota na onye nta akuko nke amuru na Cardiff na 1949, biputara otutu ederede ya n'okpuru aha (site na 1974 rue 1978).
Aha nzuzo nke Follet ji mee ihe bụ Simon Myles, Martin Martinsen, Bernard L. Ross, na Zachary Stone. Ugbu a, mgbe mwepụta nke Agwaetiti oke mmiri (1978) ejighi aha otutu banye ozo. Ugbu a, Kenneth Martin Follet bụ onye ama ama mba ụwa niile maka akụkọ gbasara akụkọ ihe mere eme na akwụkwọ nkwado. N'ezie, ọ na-achịkọta ihe karịrị otu narị nde na nde iri anọ na-ere n'ụwa niile.
1 The Spy Piers Roper (usoro)
1.2 Mgbachi Bear (1976)
2 Island nke Oké Ifufe (1978)
3 Igodo bụ na Rebeca (1980)
4 Ejima nke atọ (1996)
5 Ogidi nke ụwa trilogy
5.1 Ogidi nke (wa (1989)
5.2 Withoutwa Na-enweghị Ọgwụgwụ (2007)
5.3 Ogidi Ọkụ (2017)
5.4 Ọchịchịrị na Chi ọbụbọ (2020)
6 Narị Afọ Trilogy
6.1 Allda nke ndị Refeyim (2010)
6.2 Oge Ezumike nke (wa (2012)
6.3 Oke nke mgbe ebighi ebi (2014)
7 Akwụkwọ ndị ọzọ site n'aka Ken Follet
Ndị Nledo Piers Roper (Serie)
O mejuputara akwukwo abuo - abughi nke edeputara na Spanish - nke onye ocha ohuru ulo oru Piers Roper na-acho. Mkpa ọ dị ederede ndị a n'ime akwụkwọ edemede nke Ken Follet bụ na ha bụ ndị mbụ na abụọ aka ya na aha ya n'ezie. N'ime ha, onye edemede Britain na-eto eto nwere ike iwulite ihe odide miri emi tinyere atụmatụ nwere ike ijikọ.
Piers Roper bụ nwoke nwere oké ọchịchọ, onye aghụghọ, ọkachamara na-arụ ọrụ aka ma na-arụ ọrụ nke ọma ịbanye n'ime ụlọ ọrụ ndị na-ama aka. Onye ọrụ ahụ ga-aza naanị onye (onye a na-amaghị aha) onye isi ya bụ "Palmer." Ka ọ dị ugbu a, ọ dịghị ihe ọ bụla na ọ dịghị onye yiri ka ọ ga-akwụsị atụmatụ ya nke nnukwu ihe ọ pụtara ...
Mgbidi Bear (1976)
Roper hụrụ onwe ya na mwakpo mgbidi Street na, n'ikpeazụ, n'etiti ọgba aghara nke ìgwè mmadụ. Mgbe onye nledo ahụ malitere inyocha ihe omume ahụ, ọ na-ata ahụhụ nke Louise ahụ mara mma ma Clayton, onye isi na-eto eto nwere njikọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị wakporo ya n'ọfịs. N'ikpeazụ, naanị mmụọ mmụọ mmeri Piers nyere ya ohere imeri ụdị nsogbu a.
Agwaetiti oke mmiri (1978)
Agwaetiti mmiri - N’asụsụ Bekee - ghọrọ akwụkwọ dị mkpa maka Ken Follet. Este kacha ere esịne ke top XNUMX omimi akwụkwọ akụkọ niile oge dị ka Mystery Writers nke America. Na mgbakwunye, ihe nkiri ahụ Anya nke agịga (Anya nke agịga, 1981), nke Richard Marquand duziri, sitere na akwụkwọ a.
Arụmụka nke Agwaetiti oke mmiri na-agbagharị gburugburu Operation Fortress, usoro aghụghọ gburu site na ndị enyi n'oge Agha worldwa nke Abụọ. N'ihi aghụghọ a, ọgụgụ isi ndị agha Nazi chere na mwakpo nke Europe ga-eme site na Calais kama Normandy (dịka o mere n'ezie).
Island nke oké ifufe ...
Isi ihe dị na Rebecca (1980)
Igodo nke Rebecca bụ mbipụta nke gosipụtara aha Follet dị ka onye okike kacha ere ahịa nke akwụkwọ akụkọ ifo. Onye isi okwu, Alex Wolff, yiri ka ọ bụ onye mmụọ ozi German bụ John Eppler (ezigbo agwa), zigara Egypt n'oge Agha Worldwa nke Abụọ. Na mbu, onye nnọchi anya ndị Nazi jisiri ike nọrọ na nzuzo n'ihi nka na ịsụ asụsụ Arabik.
Ma, ekpughere Wolff mgbe a manyere ya igbu onye ọrụ Britain na obodo Asyut. N'ihi ya, onye nnọchi anya Bekee bụ Vandam malitere ịchụ onye German ahụ, onye na-ejisie ike zigara Marshal Erwin Rommel ozi nzuzo bara uru nke ukwuu na Cairo. Na nke a atụ, akwụkwọ ọgụgụ Rebecca nke Daphne du Maurier bu isi ihe na-edoghari ozi a.
Isi ihe dị na Rebecca
Nke ejima (1996)
En Nke atọ Ejima, onye na-agụ ya emikpu n’ime ya akụkọ na-adọrọ adọrọ nke na-ekwu banyere njedebe nke usoro mkpụrụ ndụ ihe nketa. Iji mee nke a, Follet na-ewebata Dr. Jeannie Ferrari, onye na-eto eto na mkpụrụ ndụ ihe nketa n'ebumnuche nke nnwale ma enwere ike ibute omume mpụ. N’iburu nke a, onye sayensị ahụ na-echepụta nnwale iji ejima abụọ kewapụrụ mgbe a mụrụ ha.
N'aka ozo, ego ndi ozo bu ihe ziri ezi, ha ezughi oke iji kpuchie nlekọta nne ya na Alzheimer. Ọzọkwa, Lisa, enyi dọkịta pụtara oke iwe; ihe ịrịba ama na-arụtụ aka na onye nwere ọgụgụ aghụghọ n’ike n’ike. N'etiti nyocha ahụ, enwere obi abụọ banyere ule nzuzo nke cloning nke ụmụ mmadụ emere na United States.
Ejima nke atọ (kacha mma ...
Trilogy Ogidi nke ụwa
XII narị afọ. Britain nwere nsogbu n’oge agha obodo a maara dịka Anarchy Bekee. Iji kọwaa ọgbaghara, Follet na-eme ọtụtụ n'ime ihe a na-eme na Kingsbridge (obodo mepere emepe). Ọbụlagodi na, Akwụkwọ akụkọ a na-enyocha okwu ndị a pụrụ ịdabere na ya dị ka akụkọ White Ship, ogbugbu nke Cardinal Thomas Becket na njem uka na Santiago de Compostela.
Osisi nke ụwa gosiputara ezigbo nkowa banyere omenaala, gentilicio na ndu ubochi nke ndi bi na Britain n’oge emepechabeghị. Ọzọkwa, ederede ahụ gosipụtara ụkpụrụ ụlọ na owuwu nke katidral Gothic n'oge ahụ. Dabere na Follet, ha were opekata mpe afọ 30 wuo, n'ihi na ndị na-ewu ụlọ na-agwụkarị ego ma ọ bụ obodo na-awakpo ha.
Ogidi ụwa ...
Kingsbridge, narị afọ nke XNUMX, feudalism bụ usoro ọchịchị. Mgbanwe azụmahịa na-aga n'ihu n'etiti ókèala dị iche iche, nke na-eduga na mmepe nke obodo na ntọala ọtụtụ ahịa na kọntinent ahụ. O sina dị, mmebi nke Ọnwụ Ojii na-agbanwe usoro e guzobere n'etiti ngalaba nke ike nke ndị okenye, ndị ụkọchukwu na ụlọ ọrụ ndị nkịtị obodo.
Ọrịa kachasị egwu n'akụkọ ihe mere eme mere ka a gbanwee usoro ọgwụgwọ na-enweghị isi na ọgwụ na-eme nchọpụta. Ọzọkwa, Ọ bụ otu narị afọ nke hụrụ ịrị elu ocheeze nke Edward III na mbuso agha ọbara nke mechara mee France.
A ụwa na-enweghị ọgwụgwụ ...
Afọ 1558. Kingsbridge bụ obodo kewara n'etiti ndị okpukpe Katọlik na-anụ ọkụ n'obi na ndị Protestant na-apụta. N'oge ahụ, echichi nke Elizabeth nke Mbụ dị ka Eze Nwanyị England emechaala na ikike ndị ọzọ nke Europe na-ebute izu iji kwatuo ya. N'otu aka ahụ, Follet ekwuola nke ahụ akwụkwọ a kwuru okwu ndị dị mkpa taa: ndidi na extremism.
Otu ogidi nke ọkụ ...
Nke a post bụ ihe butere ụzọ n'ime usoro atọ ahụ Ogidi nke ụwa. Mmepe nke ihe omume laghachiri afọ iri gara aga nke narị afọ nke iri, n'etiti Ọchịchịrị Ọchịchịrị. Ndị na-akwado ya bụ onye mọnk, nwa agbọghọ Nordic ka lụrụ di na nwunye na onye na-ewu ụgbọ mmiri. Ha na-ezukọ na Kingsbridge ma, maka ebumnuche dị iche iche, ga-eche ihu onye ụkọchukwu na-enweghị isi na-agụ agụụ.
Trilogy Narị Afọ (Narị Afọ)
Usoro nkwado a na-ekpuchi esemokwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ihe omume kacha ekpe mmadụ ikpe na narị afọ nke XNUMX. A na-ahụ akwụkwọ atọ ahụ n'ogologo ha yana akụkọ ihe mere eme. N'agbanyeghi na agwakọtara ihe odide mepụtara, Follet na-egosipụta ọmarịcha ihe ọmụma banyere omenala, ejiji, okwu na ntọala nke oge ọ bụla.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị dị mkpa dị na mpaghara nke ọ bụla:
Ogbugbu nke Archduke Francisco Fernando nke Austria na nwunye ya Sofía Chotek (June 1914) na mmalite mmalite nke Agha Ukwu na Europe;
Nloghachi nke Vladimir Ilyich Ulyanov - Lenin - na Petrograd (Eprel 1917);
Iwu akọrọ Iwu na United States (Jenụwarị 1920).
Nkwado nke ike ndị Nazi na Germany na nguzobe nke ọchịchị nke atọ (1933 - 1938);
Nkwupụta nke New Deal na United States (1933 - 1937);
Agha IIwa nke Abụọ (1939 - 1945);
Ọrụ Manhattan (1941-1945);
Mbinye aka nke Akwụkwọ ikike nke United Nations na San Francisco (1945);
Atomic detonations n’elu Hiroshima na Nagasaki (1945);
Atụmatụ Marshall (1947);
Nnwale nuklia Soviet mbụ (1949).
Mwube nke mgbidi Berlin (1961);
Nsogbu Ballistic Missile na Cuba (1962);
Mwakpo nke USSR (1968) wakporo Czechoslovakia;
Ogbugbu nke onye isi ala America John F. Kennedy (1963);
Civil Rights Movement na USA (1961-1968);
Agha Vietnam (1965 - 1975);
Ihe nyocha nke Watergate (1972).
[[Ofzọ mbata nke ...
Akwụkwọ ndị ọzọ site n'aka Ken Follet
Nwoke ahụ si St. Petersburg (1982);
Ugo nke ugo (1983);
Ndagwurugwu ọdụm (1986);
N'abalị n'elu mmiri (1991);
Akụ dị egwu (1993);
Ebe a na-akpọ nnwere onwe (1995);
N’ọnụ ọnụ dragọn ahụ (1998);
Egwuregwu abụọ (2000);
Na White (2004).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Ken Follet: akwụkwọ